Mapurasitiki epurasitiki mugungwa idambudziko rakakomba renharaunda | Green Renewables
Sezvatakatotaura pane dzimwe nhambo, mapurasitiki inosvibisa kwazvo kumakungwa edu nemakungwa. Mamirioni ematani epurasitiki akachengetwa mumakungwa edu zvichikonzera kukanganisa kune zvinomera nemhuka zvinogara mariri.
Kune angangoita mamirioni gumi nemaviri ematani yemarara epurasitiki mumakungwa. Uku kusvibiswa hakusi kuoneka sevamwe vakasvibiswa, asi iko kusvibiswa pamwero wepasirese. Nyanzvi dzinofungidzira kuti zvikamu zvishanu kubva muzana zvepurasitiki zvese zvinogadzirwa pasirese zvinoguma zvave marara mumakungwa. Chii chinoitika kune aya mapurasitiki?
1 Kusvibiswa kwemakungwa nemakungwa
2 Mapurasitiki epurasitiki uye dambudziko renyika dziri kubuda
Kusvibiswa kwemakungwa nemakungwa
Mapurasitiki mazhinji anosvika kugungwa kuburikidza nenzizi. Idzi tsvina dziri kwese kwese. Ose pamhenderekedzo uye mumvura, hove uye shiri dzegungwa dzinotambura nekuvapo kwavo
Dambudziko hombe ndere microplastics, zvidimbu zvidiki, izvo zvinoumbwa nekumonyorwa kwematai emotokari kana zvirimo muzvizoro izvo zviri kuramba zvichiwedzera kuva nenjodzi. Nyanzvi dzinotaura nezve angangoita mashanu matiririyoni ezviuru, ane huremu hwakazara hwematani 270.000, anowanikwa mumakungwa. 94% yeshiri dzegungwa dzakawanikwa dzakafa pamahombekombe eGerman vane microplastics mudumbu mavo.
Mapurasitiki epurasitiki uye dambudziko renyika dziri kubuda
Semuenzaniso, munyika dzakabudirira senge Germany, mabhegi epurasitiki akanyangarika. Nekudaro, mune dzichiri kusimukira hupfumi senge Africa, kukura kwehupfumi kunoreva kuwanda kwepurasitiki uye nekudaro kuwanda kwemarara.
Kunyangwe munyika zhinji mapurasitiki ari mashoma uye mashoma kushandiswa, kuchine zvakawanda zvekugadzirisa. Vanhu vanofanirwa kuziviswa kuti iri idambudziko chairo uye kuti rinouraya mhuka zhinji. . Kuchenesa kilomita imwechete yemahombekombe emitengo kusvika ku65.000 euros pagore, saka zvinodhurawo kuhurumende.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Mapurasitiki epurasitiki mugungwa idambudziko rakakomba renharaunda
Zvizhinji zvinoiswa mukushanda kwesimba kupfuura mumafuta